UChris ungene ngephutha ekulingiseni
UCHRIS ‘Q’ Radebe olingisa emdlalweni Isibaya uthi yize abantu besazomdinelwa uDabula ngendlela azokwenza ngayo izinto kodwa yena empilweni yakhe yangempela akafani noDabula. Uthi ulungile futhi utshwala yinto angayazi nokuthi inambitheka kanjani
NOKUBONGWA PHENYANE | November 2, 2018
ABANYE bamazi njengoba eseyinkosi uDabula Ngubane emdlalweni Isibaya.
Kodwa uChris “Q” Radebe, ozalwa eXopo, ukhule eseGoli, ungumbhali wemidlalo eminingi kuleli, emikhulu nehamba phambili.
Le nsizwa isiveze ukuthi inesandla ekubhalweni kwemidlalo okukhona kuyo iZabalaza, The River, The Queen, Rhythm City, Uzalo, Isibaya, Abomama neminye.
UChris uthi ekulingiseni ungene ngephutha njengoba uthando lwakhe lusekubhaleni imidlalo ehlukene.
“Ukubhala angikufundelanga njengoba u-martic wami ngingawuphasanga nangendlela. Ngemuva kokushonelwa yiwona wonke umndeni wami ngabona ukuthi kunokuthi ngihlale ngibalise kungcono ngifune into engizoziphilisa ngayo, kula ngahambela khona izindawo eziningi ngaze ngangena kulo mkhakha,” kusho uChris.
Ekulingiseni uthe ungene ngemuva kokubonwa u-Angus Gibson weBomb Production, ekhiqiza Isibaya.
“Lapha sasibhalela khona umdlalo Abomama kwakusendaweni eyodwa nala kusebenzela khona iBomb. Ngathi ngiphuma ngiya endlini encane u-Angus wangibona wangibiza wacela ukuthatha isithombe sami. Ngemuva kwalokho akukho akukhuluma nami wangishiya ngikhexile. Ngabe sengithola ucingo engitshela ukuthi kukhona indawo afuna ngiyilingise emdlalweni Isithembiso, eyomuntu oyisigebengu futhi izosheshe iphele. Ngenxa yokuthi bathi izosheshe iphele ngavuma ngayithatha,” kuchaza uChris.
Uthe ngemuva kokuqeda leyo ndawo uDesiree wakhona eBomb wamtshela ngendawo kaDabula, wamncenga ukuthi ayithathe njengoba engamboni omunye engamfanela.
“Ngiyayithokozela kakhulu le ndawo futhi nokulingisa ngiyakujabulela manje, kodwa akuyona into engizogxila kuyo. Emdlalweni Isibaya abantu basazomdinelwa kakhulu uDabula njengoba eyinkosi enenhliziyo embi futhi efuna ukuhlala ibona abantu behlukumezekile. Abantu abafana noDuma noMpiyakhe Zungu basazohlukumezeka ngaphansi kwale nkosi. Ngiyaxolisa kakhulu kubabukeli kodwa engifuna bakwazi ukuthi mina angiyena nje umuntu onenhliziyo embi ngisho utshwala nogwayi angikuthinti,” kuchaza uChris.